Clad-Rack ASRS Solution
Waa maxay Clad-Rack Warehouse?
Bakhaarka clad-rack wuxuu ka samaysan karaa nooc kasta oo nidaamka kaydinta ah maadaama muuqaalkooda ugu weyni uu yahay raafka si uu u sameeyo qayb ka mid ah dhismaha dhismaha.
Nidaamkan, rafcaanku ma aha oo kaliya inuu taageerayo culeyska alaabta la kaydiyay, laakiin sidoo kale culeyska baqshadda dhismaha, iyo sidoo kale xoogagga dibadda sida dabaysha ama barafka.
Tani waa sababta bakhaarrada dharka leh ay u taagan yihiin fikradda isticmaalka ugu wanaagsan ee bakhaarka: habka dhismaha, marka hore rashka ayaa la isku daraa, ka dibna baqshadda dhismaha ayaa lagu dhisay hareeraha dhismahan ilaa bakhaarka la dhammeeyo.
Inta badan dhismayaal dhar-xidhan waxaa lagu qalabeeyay habab otomaatig ah iyo qalab-robotik ah oo loogu talagalay maaraynta alaabta, gaar ahaan haddii ay yihiin kuwo badan.Dhererka ugu badan ee dhismayaasha-rack-ka waxaa xaddiday heerarka maxalliga ah iyo dhererka ay gaaraan wiishashka is-dul-saarista ama gawaarida fargeetada.Tani waxay tidhi, bakhaaro ka sarreeya 40 mitir ayaa la dhisi karaa.
Faa'iidooyinka Bakhaarka Clad-Racking
• Si buuxda u isticmaalida booska
Bakhaarku waxa loo qaabeeyey isla wakhtigaas sida rafiiqyada oo kaliya waxa ay ku jiraan booska loo baahan yahay, iyada oo aan lahayn tiirar dhexdhexaad ah oo saameeya qaybintooda.
• Dhererka ugu badan ee dhismaha
Waxaad ku dhisi kartaa dherer kasta, waxay kuxirantahay oo kaliya xeerarka maxalliga ah ama baaxadda hababka maaraynta ee loo isticmaalo, awood u yeelashada in ka badan 45m sare (taas oo noqon doonta mid adag oo qaali ah dhismaha dhaqameed).
• Dhisme fudud
Qaab dhismeedka oo dhan waxaa lagu soo ururiyaa dhejis la taaban karo oo dhumucdiisuna waxay ku habboon tahay si loo gaaro qaybinta isku midka ah ee ciidamada aasaaska;ma jiraan culaysyo badan.
• Waqti yar oo lagu dhammaystirayo
Marka saabka la dhiso, dhammaan qaab-dhismeedka iyo xidhidhisku si tartiib tartiib ah oo isku mid ah ayaa loo rakibay.
• Kharash kaydinta
Sida caadiga ah, qiimaha bakhaar-rack-ku waa ka yar yahay kuwa caadiga ah.Marka uu bato dhererka dhismaha, ayaa faa'iido badan u leh nidaamka dhar-xidhka.
Shaqooyinka madaniga ah ee ugu yar
Waxay u baahan tahay oo kaliya in la dhiso suunka dhulka iyo, xaaladaha qaarkood, derbi aan biyuhu lahayn oo u dhexeeya hal ilaa laba mitir.Xaaladdan oo kale aagga hawlgallada ayaa u baahan in la balaadhiyo si loo helo oo loo diro, oo ah dhaqan
Dhismuhu waa la dhisi karaa, laakiin dherer ku filan oo aan la gaadhin wadarta guud ee bakhaarka.
Si fudud loo saari karo
Ahaanshaha qaab-dhismeed ay sameeyeen curiyeyaasha rack caadiga ah kuwaas oo hore u soo shiray ama xidhmay, waxa lagu dejin karaa si fudud oo boqolkiiba sare ee qaybaha dib loo soo celiyo.
Qaab dhismeedka gogosha wuxuu ka kooban yahay
• Tusmada saqafka
• Qaab dhismeedka gidaarka
• Qaab dhismeedka gidaarka dhamaadka
• Darbiga, xaashida saqafka iyo qalabyada
• Dhismaha aagga diyaarinta
Tilmaamaha loogu talagalay Huaruide Clad-Rack Nooca Cutubka Xamuulka AS/RS
• Awoodda miisaanka ugu badan: 3 tan
Nooca Huaruide Clad-Rack Kaydinta Hooyada iyo Ilmaha
• Awoodda miisaanka ugu badan: 1.5 tan
• Dhererka ugu sarreeya: 30m
Xawaaraha baabuurka hooyada: 0-160m/daqiiqo
Xawaaraha baabuurka ilmaha: 0-60m/s
Xawaaraha kor u qaadista suunka: 0-90m/min
Alibaba Clad-Rack Nooca United Load ASRS: bakhaarka ugu weyn Aasiya oo leh ku dhawaad ​​100,000 oo baaldi
Alibaba Group Holding Limited, oo sidoo kale loo yaqaan Alibaba Group iyo Alibaba.com, waa shirkad tignoolajiyadeed oo caalami ah oo Shiinaha ah oo ku takhasustay ganacsiga e-commerce, tafaariiqda, internetka, iyo tignoolajiyada.Waxaa la asaasay 28 Juun 1999 magaalada Hangzhou, Zhejiang, shirkadu waxay siisaa macaamiisha-ilaa-macaamiisha (C2C), ganacsi-macmiilka (B2C), iyo ganacsi-ganacsi (B2B) adeegyada iibka iyada oo loo marayo marinnada shabakadda, iyo sidoo kale elektarooniga adeegyada lacag-bixinta, matoorada raadinta wax iibsiga iyo adeegyada xisaabinta daruuraha.Waxay leedahay oo ay ku shaqeysaa faylal kala duwan oo shirkado ah oo adduunka oo dhan ah qaybo ganacsi oo badan.
Si loola tacaalo buuraha dalabaadka, waxay codsanaysaa awoodda kaydinta ugu weyn ee aagga cagta go'an.Sababtoo ah booska ayaa u dhow badda magaalada Ningbo, halkaas oo ay khatar ku tahay duufaan iyo roobab culus oo joogto ah.Dhismaha qaab dhismeedka birta ee soo jireenka ah waa ay adagtahay in lagu dhibaateeyo cimilo aad u daran oo ka sareysa 30 m.Qaab dhismeedka xidh-xidhan ayaa noqda xalka kaliya.
Maaddaama ay tahay xalka shirkadda e-commerce, si loola tacaalo tiro badan oo SKU ah, wiishka stacker ayaa ah doorashada ugu fiican.Markaa wareegyo badan ka dib wadahadal macaamiisha.Rack-rack nooca culaab midaysan ASRS waxaa loo go'aamiyay inuu yahay xalka ugu dambeeya ee mashruucan.
Awooda Kaydinta Ugu Weyn Eeshiya
Kaydinta Alibaba Ningbo Clad-Rack Warehouse waxay gaartaa in ka badan 100,000 goobood oo pallet ah oo leh 34 m dherer gudaha ah (dhererka dhismaha 38m), gabi ahaanba 17 lakab, iyo 102 saf oo goobta kaydinta ah.Waxay qiyaastaa 70,000 oo tan marka kaydinta buuxda la isticmaalo.
Imtixaanka Badbaadada Qaab-dhismeedka Rack: Falanqaynta Qaybta Dhamaystiran
Xisaabinta rack waxaa sameeyay software-ka falanqaynta element ugu horumarsan.Marka loo eego shuruudaha go'doominta dabka, qaabka qaabka birta kulul ee kulul ayaa la sameeyay, guud ahaan shilka burburka waa laga fogaan karaa ka dib markii qaabka qaboojinta uu lumiyo doorkiisa taageerada dabka ama shilalka kale ee dhismaha bakhaarka.
Iyada oo ku saleysan fikradda naqshadeynta ee gobolka xaddidan ee suurtogalka ah, kaliya isku dhafka culeyska dhintay, culeyska barafka, culeyska dabaysha iyo ficilka seismic ayaa loo tixgeliyaa xaalad shaqo oo noocan oo kale ah.
Falanqaynta Cunsurka Dhamaystiran ee Qaab-dhismeedka Racking
Dhismuhu wuxuu ka kooban yahay 2 dabaq, sagxadaha gudaha laga soo galo lagana soo baxo dabaqa 1aad, hawlgalka soo qaadista ayaa lagu samayn doonaa dabaqa 2aad.
Mashruucan waxaa ka mid ah naqshadeynta, injineernimada, isdhexgalka, rakibidda iyo hawlgelinta nidaamyada soo socda ee iswada:
• 38 mitir oo dhererkeedu yahay
Xiritaanka waxaa ka mid ah xaashida gidaarka, darbiga dhinaca iyo dhamaadka, saqafka, iyo qalabyada kale.
• 28 qaybood oo ah wiishka ASRS
• 40 xabbo oo RGV ah oo leh nidaamka ramaynta oo ku socda 2 siddo oo loogu talagalay qaadashada iyo dhejiska.
1stdabaqa (dhulka) - ka baxa & gudaha
2nddabaqa - Qaadashada
Faa'iidooyinka Kooxda Alibaba
• Isticmaalka meel sare
Sababtoo ah ma jiro tiir gudaha ah, ka faa'iidaysiga boosku 25% wuu ka sarreeyaa bakhaarka goonida ah.
• Dhererka ugu badan
Dhererka 38 mitir wuxuu aad uga sarreeyaa dhismaha qaab dhismeedka birta ee caadiga ah kaas oo badanaa ku dhow 24 mitir.
• Qaab-dhismeedka xoogga sare
Goobtu waxay u dhowdahay badda, markaa duufaantu aad ayay u badan tahay, taas oo u baahan dhismo xoog leh.Mashruucan, mid kasta oo toosan ayaa taageero siiya bakhaarka-rack-ka, sidoo kale dabaysha ka-hortagga dabaysha ayaa ku dhow si loo hubiyo xasilloonida dhismaha.
Qiimaha waxtarka leh
In ka badan 30% kharash ayaa la badbaadiyay marka la barbar dhigo dhismaha birta marka hore ka dibna la rakibo qorshaha ASRS.
• Hufnaanta shaqo ee sare
Waxay la macaamili kartaa 1400 pallet saacaddii, 14,000 oo baakidh ah maalintii.
• Maamulka caqliga leh
Marka la eego cadaadiska weyn ee tirada badan ee palette gudaha/kabaxda, WMS waxay ku siin kartaa 100% saxsanaanta hawlgalka saxda ah.Ka sokow, codsiga WMS, kiis kasta oo badeecad ah waa lala socon karaa
Alibaba Clad-Rack Nooca United Load ASRS, Ningbo City
Awoodda Kaydinta 100,000pp
Nooca Clad-Rack ASRS
Cabbirka suufka 1200*1000
Stacker Crane Qty. 28
Isku soo wada duuboo 1400 pallet/saacaddii